बिहीवारदेखि औद्योगिक प्रदर्शनी | गृहपृष्ठ
Home बजार बिहीवारदेखि औद्योगिक प्रदर्शनी
फागुन ३, काठमाडौं (अस)। आगामी फागुन ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म राजधानीमा साना तथा घरेलु औद्योगिक प्रदर्शनी गरिने भएको छ । विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तरको अभिवृद्धि तथा उनीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने उद्देश्यका साथ सो प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले बताएका छन् । २२ औं प्रदर्शनीको रूपमा हुन लागेको यो कार्यक्रम लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले आयोजना गरेको हो । प्रदर्शनीमा देशभरका विभिन्न जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरू प्रदर्शनी तथा विक्रीका लागि राखिने आयोजक समितिका संयोजक एवम् घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भरतबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदर्शनीका लागि करीब रू. २२ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
क्रेता र विक्रेताबीच अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली उद्योगद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रचारप्रसार गर्ने र बजारयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गराउने कार्यक्रमको थप उद्देश्य रहेको आयोजकको दाबी छ । प्रदर्शनीमा राखिएका वस्तु समूहबाट उत्कृष्ट हुने १५ उद्यमीलाई प्रमाणपत्र तथा भारत भ्रमणको अवसर प्रदान गरिनेछ । त्यसैगरी अन्य १५ जनालाई सान्त्वना पुरस्कार स्वरूप रू. ३ हजार नगद प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए । उपत्यकाबाहिरका उद्यमीलाई आउने जाने बस तथा हवाई भाडा र दैनिक रू. २ सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने आयोजकले बताएका छन् । उनीहरूको सुविधाका लागि निःशुल्क स्टलसमेत उपलब्ध हुनेछ । प्रदर्शनीमा अपाङ्ग तथा एकल महिलाका लागिसमेत निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराइने भएको छ । उपत्यकाका उद्यमीले भने प्रतिस्टल रू. १ हजार भाडा तिर्नुपर्नेछ ।
प्रदर्शनीमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको २ सय ५० स्टल रहनेछन् । मेला अवधिभर रू. ३ करोडबराबरको वस्तु खरीद-विक्री हुने आयोजकको अनुमान छ । प्रदर्शनी अवलोकन गर्न विद्यार्थीका लागि निःशुल्क गरिएको छ भने अन्यका लागि रू. १० शुल्क तोकिएको छ । गलैंचा, काठ ढुङ्गा धातु, कला सेरामिक्स तथा भाडाकुँडा, अल्लो, लोक्ता, जुट तथा अन्य प्राकृतिक रेशाबाट उत्पादित वस्तुहरू, छालाजन्य वस्तुहरू, गलैंचा, राडीपाखी, उनी र सुतीबाट बनेका उत्पादनहरू मेलाका मुख्य आकर्षण रहनेछन् । त्यसैगरी रोल्पाको प्राकृतिक रेशाको कपडा, दोलखाको सिस्नुको पाउडर, जुम्लाको जडीबुटी र स्याउको चाना, जिरीको याक चिज, दैलेखको सावरको जुत्ता र डोल्पाको यार्सा गुम्बासमेत प्रदर्शनीमा समावेश गरिनेछ । सो प्रदर्शनी १ लाख ५० हजार व्यक्तिले अवलोकन गर्ने आयोजकको अनुमान छ ।
हस्तकला प्रवर्द्धनका लागि महासङ्घ र एनआरएनबीच सम्झौता
फागुन ३, काठमाडौं (अस)। नेपाल हस्तकला महासङ्घ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) बीच हस्तकला प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वा र गैर आवासयी नेपाली सङ्घका अध्यक्ष देवमान हिराचनले समझदारी पत्रमा हस्तक्षर गरे ।
दुवै संस्थाका परामर्शमा व्यापार तथा व्यवसाय वृद्धिका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, प्रशिक्षण प्रदर्शनी, व्यापार मेला, उपयुक्त प्रविधिको आदनप्रदान गर्ने तथा दुवै संस्थाले व्यापारिक चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा विदेशी मुलुकबाट कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार छूटजस्ता विषयमा संयुक्त रूपमा पहल गर्नेलगायत बुँदा रहेका छन् ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै गैर आवासयी नेपाली सङ्घका अध्यक्ष देवमान हिराचनले नेपालमा उत्पादित जुनसुकै सामग्रीको पनि बाहिरी मुलुकमा माग रहेको उल्लेख गरे । गुणस्तरको कमीले अपेक्षाअनुसार निर्यात हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्नका लागि उद्यमीहरूलाई आग्रहसमेत गरे ।
यस समझदारीले नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको निर्यातमा सहयोग पुग्ने नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले बताए । यो सम्झौताले नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्नका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सधैं तयार रहेको कार्यक्रमका अन्य सहभागीले बताए । हाल नेपालबाट करीब ८० देशमा करीब ४ दर्जन प्रकारका हस्तकलाका सामग्री निर्यात हुँदै आएका छन् ।
दुर्लुङ लालीगुराँस महोत्सव सम्पन्न
फागुन ३, पर्वत (अस)। पर्वतको सदरमुकाम कुस्माबजारसँगै जोडिएको दुर्लुङ गाविसमा आयोजित दुर्लुङ लालीगुराँस महोत्सव सोमवार सम्पन्न भयो । स्थानीय संस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्ने तथा दुलुङलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो । महोत्सवमा गुरुङ संस्कृति, दृश्यावलोकन, लालीगुरासँको जङ्गल भ्रमण, भजन र रत्यौली प्रतियोगितालगायत कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । महोत्सव करीब ३० हजार दर्शकले अवलोकन गरेको आयोजक समितिका संयोजक प्रभु गुरुङले जानकारी दिए । महोत्सवमा होम स्टे सुविधा, गुन्द्रुक र ढिँडो, लोकल कुखुरा, सेलरोटी आदि परिकार खुवाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको थियो ।
दुर्लुङ्मा रहेको कोटबाट पर्वतका ४० भन्दा बढी गाविस, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मीलगायत जिल्लाका साथै धौलागिरीदेखि अन्नपूर्ण सम्मका हिमश्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँको लालीगुराँसले भरिएको जङ्गल, महभीर र मनोरम झरना आदिले जोसुकैलाई पनि आकर्षित गर्दै आएको छ । महोत्सवका कारण दुर्लुङ गाविसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुगेको संयोजक गुरुङले बताए ।
चितवन उद्योग सङ्घको अध्यक्षमा अधिकारी
फागुन ३, चितवन (अस) । चितवन उद्योग सङ्घको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद अधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । सोमवार सम्पन्न अधिवेशनले अधिकारीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । अधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्दै व्यवसायीहरूले घरेलु उद्योगको विकास नभएसम्म ठूला उद्योगको विकास हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । उद्योग विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज पोखरेलले घरेलु उद्योगको विकासका लागि नेपाल सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति ल्याएको जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसायीको समस्यालाई समेटेर ल्याइएको नीतिले घरेलु उद्योगको विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ । उनले राजनीतिक अस्थिरता, लोडशेडिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता समस्यालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति ल्याएको बताए ।
यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद अर्यालले घरेलु उद्योगको विकासले मात्रै नेपालको औद्योगिक विकास हुने ठोकुवा गरे । घरेलु उद्योगको विकास नभएसम्म देशको आर्थिक मेरुदण्डसमेत बलियो नहुने तर्क गर्दै उनले घरेलु उद्योगको विकासतर्फसबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा हेटौडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरेले स्पष्ट नीति नभएका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा ३ सय ६५ दिनमा १ सय ८० दिन मात्र उद्योग सञ्चालन भएको जानकारी गराउँदै घिमिरेले ३ सय ६५ दिन नै उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेले परिसङ्घको सदस्य चितवन उद्योग सङ्घलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रत्योजन गरेको निर्णय सहितको प्रमाणपत्र सङ्घका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरे । उनले उक्त सङ्घलाई क्रियाशील बनाउन परिसङ्घबाट निरन्तर सहयोग र सहकार्य रहने आश्वासन व्यक्त गरे । सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराई, स्थानीय विकास अधिकारी उद्धव तिमिल्सिना, घरेलु तथा साना उद्योग मन्त्रालयका कल्याणी मिश्र, कुलचन्द्र विष्टलगायतले चितवनलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पोखरामा रेडियो छुनुमुनु शुरू
फागुन ३, पोखरा (अस) । पोखरामा बालबालिकाले सञ्चालन गर्ने गरी एफएम रेडियो छुनुमुनु ८७ दशमलव ९ मेगाहर्जको प्रसारण शुरू भएको छ । ‘अब हाम्रो पालो’ भन्ने उद्घोषका साथ शुरू भएको यो रेडियो बालबालिकाद्वारा सञ्चालित नेपालकै पहिलो रेडियो हो । रेडियो सञ्चालनमा कोही पनि बालबालिकालाई भेदभाव नगरी समान अवसर प्रदान गर्ने छुनुमुनु अभियानका अध्यक्ष दिलीपराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रेडियोले बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटनमा सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ । रेडियोबाट प्रसारण हुने विभिन्न कार्यक्रमले बालबालिकाहरूको नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने प्रबन्ध सञ्चालक रविराज बसौलाको धारणा छ । पोखराको सभागृह चोकमा प्रसारण केन्द्र रहेको रेडियो छुनुमुनु ८७ दशमलव ९ मेगाहर्जको स्टेशन म्यानेजर, प्राविधिक तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालकहरू बालबालिका रहनेछन् । कार्यक्रम बिहान ६ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ । अहिले यस रेडियाबाट बिहान ६ देखि ९ सम्म विभिन्न जानकारी मूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसका साथै निकट भविष्यमा युवावर्गलाई ध्यानमा राखेर ‘सेभेन टिन’ तथा बालबालिकाहरूको मात्र समाचार प्रकाशन गर्ने डवली साप्ताहिकको तयारी रहेको छुनुमुनुले जानकारी दिएको छ ।
फक्स वागन अटोरिदम सम्पन्न
प्रणयदिवसलाई लक्षित गर्दै फक्स वागनको आधिकारिक विक्रेता पूजा इण्टरनेशनलले आयोजना गरेको कार्यक्रम फक्स वागन अटो रिदम सोमवार सम्पन्न भयो । रिदमको अन्तिम दिन प्रणय दिवस भएकाले सीटी सेण्टरमा आउने हरेक जोडीका लागि आफ्नो सन्देश साट्न र प्रेम अभिव्यक्त गर्न सो कार्यक्रम उपयुक्त माध्यमसमेत बनेको थियो । कार्यक्रममा करीब ८ सयभन्दा बढी जोडीले आफ्ना प्रेमी प्रेमिकाका लागि सन्देश दिएका थिए । त्यसमध्ये राम्रो सन्देश दिने २० जोडीलाई फक्स वागनको टि-सर्ट र क्याप प्रदान गरिएको थियो । कम्पनीले यो उपहारको साथमा बिग सिनेमाको टिकटसमेत प्रदान गरेको थियो । कम्पनीले लक्की ड्रमार्फत विजयी घोषित भएको सोमनाथको जोडीलाई डीटीएच टीभी सित्तैमा प्रदान गरेको थियो । सो अवसरमा बिटल कारमा टेष्ट ड्राइभ गर्ने मौकासमेत प्रदान गरियो । माघ ३० गते शनिवारदेखि शुरू भएको कार्यक्रम प्रेम दिवसको साँझमा विभिन्न कार्यक्रम गरी समापन गरिएको थियो । कार्यक्रमा बिटल्स, इगल्स, जिमी हेण्ड्रस्कस, बोव डायन, ज्याज म्युजिकलगायत प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीले सन् १९६० र ७० का प्रेममय सुमधुर गीतहरूबाट मनोरञ्जन लिएका थिए ।
नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्स् संस्थाले गत डिसेम्बरमा सञ्चालन गरेको चार्टड एकाउण्टेन्सी फाउण्डेशन, क्याप-१, प्रमाणपत्रतह, क्याप-२, अन्तिम परीक्षा र क्याप-३ को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । सो परीक्षाफल संस्थाको वेवसाइटमार्फ हर्ेन सकिने संस्थाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जेडटीईको थ्रीजी मोबाइल सेट बजारमा
मुरारका अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको पी के ट्रेर्डश प्रालिले जेडटीईका हाई-इण्ड थ्रीजी मोबाइल फोन ‘एफ १०१’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यसमा दुइ इञ्चको टीएफटी ६५ के कलर डिस्प्लेका साथै दर्ुइ मेगापिक्सेलको जुमसहितको डिजिटल क्यामरा पनि छ । यो सेटमा जाभा एमआईडीपी २ दशमलव शून्य तथा ८ जीबीसम्मको एसडी मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्नसक्ने सुविधा छ । यसमा अर्गनाइजर, भ्वाइस मेमो, ब्राउजर वाप, एचटीएमएल, एमपी थ्री, एफएम रेडियो, भिडियो कल र भी २ दशमलव १ सहित ए २ डीपी ब्लूटुथ रहेको कम्पनीले बताएको छ । यस सेटमा १ वर्षको तथा ब्याट्रीमा ६ महीनाको वारेण्टी रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसको मूल्य रू. ७ हजार ९ सय ९९ छ । कम्पनीले केही समयअघि जेडटीई लाइट ट्याब्लेट पीसी पनि बजारमा ल्याएको थियो ।
एभरेष्टको इजी मोबाइल बैङ्किङ सेवा
एभरेष्ट बैङ्कले ‘इजी मोबाइल बैङ्किङ’ सुविधा दिन शुरू गरेको छ । यो सुविधाअनुसार एभरेष्ट बैङ्कका ग्राहकहरूले मोबाइलमार्फत बैङ्कमा रहेको आफ्नो खाताबाट अर्को खातामा पैसा पठाउन सक्छन् । बैङ्कले हाल यो सुविधा नेपाल टेलिकमका प्रि-पेड तथा पोष्टपेड मोबाइल प्रयोगर्काका लागि रहेको बताएको छ । यसअघि नै बैङ्कले इजी ‘एसएमएस’ बिल भुक्तानी तथा फोन बिल तिर्ने र मोबाइल रिचार्ज गर्ने सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । यो सुविधा बैङ्कका ३९ ओटै शाखाबाट उपलब्ध हुनेछ । ग्राहकले ५६८८मा एसएमएस गरी जुनसुकै समयमा पनि यो सुविधा लिन सक्ने बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।
अरामेक्सद्वारा उपहार प्रदान
अरामेक्स कुरियर नेपालले अनलाइन बुकिङ योजना अन्तर्गतका भाग्यशाली विजेतालाई गत शुक्रवार उपहार प्रदान गरेको छ । कम्पनीले ४ महीनादेखि सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कम्पनीले भाग्यशाली विजेता नेपा क्राफ्ट्सका सञ्चालक प्रज्वल श्रेष्ठलाई आई-फोन प्रदान गरेको थियो । उनलाई कम्पनीका अध्यक्ष महेन्द्रमान श्रेष्ठले सो उपहार प्रदान गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै कम्पनीका कण्ट्री म्यानेजर मनीषमान श्रेष्ठले आगामी दिनहरूमा आफ्ना ग्राहक समक्ष थप सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वर्ल्डलिङ्क र ओक्लाबीच सहकार्य
आईएसपी सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्कले इण्टरनेट मिटरिङका लागि ग्लोबल ब्रोड ब्याण्ड ‘ओक्ला’ कम्पनीसँग साझेदारी गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक इण्टरनेट मिटरिङ सेवा शुरू गर्ने यो वर्ल्डलिङ्क पहिलो भएको कम्पनीको दाबी छ । अब वर्ल्डलिङ्कका ग्राहकहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेको इण्टरनेटको गति आफै मापन गर्न सक्नेछन् । ‘स्पिडटेष्ट डट नेट’मार्फत प्रदान गर्ने सेवा तथा ‘पिङटेष्टडट नेट सर्भर’हरू स्थानीयस्तरमा नै स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसका साथै यी सेवा प्रयोग गर्दा इण्टरनेट सेवाको गुणस्तरसमेत मापन भई आईपी टेलिफोन, स्टि्रमिङ म्युजिक वा भिडियो, टेलिकम्युनिकेशन तथा अनलाइन गेमिङजस्ता अनलाइन सेवाहरूको सञ्चालनलाई चुस्त राख्न मद्दत पुग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।